မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း မှ
အလုပ်7ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ
We are looking for experienced French Language Teacher, ideally with valid credentials. Provide instruction in speaking, reading, writing French language, as well as lessons in French literature and culture.Teach French grammar, reading, pronunciation, spelling, vocabulary, composition and dialogue.
National Sale & Marketing Manager ( M / F )
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK More than 10,000,000+
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ
လွန်ခဲ့သော4ပတ် က
Job Summary Implementing full set of product marketing activities ; execute product marketing plans in compliance with marketing activities including ATL , BTL and PR Events Set up Marketing Plan & Budget ,Brand Development, Social Media Management Campaign Management
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK Less than 100,000
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ2ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ 1 ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 1 အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 3
မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း 7
မန္တလေး5ရန်ကုန် 2
Expats Preferred6Repats Preferred 4